È na è azo
Ny taratasy E amin'ny fasana lantom-peony.
Eo amin'ny malagasy, ny taratasy è dia matetika ampiasaina ao amin'ny lasa ny matoanteny amin'ny endrika matoanteny amin'ny tononkalo andinin-teny milaza fa ny farany izy dia tokony ho tononina misaraka. Ohatra, blessèd dia manondro ny poloney BLES-idEndrika:Respell fa noho ny fitahiana lehibeEndrika:Respell. Izany koa no miseho amin'ny teny nindramina , toy ny italiana caffè.
Ao Emilian, è no ampiasaina mba hisolo tena [ɛː], ohatra lèt [lɛːt] "fandriana". Ao Romagnol, maneho [ɛ], ohatra vècc' [vɛtʃː] "lahy antitra".
Amin'ny teny frantsay, izany foana ny maneho [ɛ] feo-taratasy e rehefa izany dia any amin'ny farany ny feo sasany.
È midika hoe "no" ankehitriny italiana Endrika:IPA-it, ohatra il fary è piccolo izay midika hoe "ny alika no kely". Izany dia ampy amin'ny teny ĕst sy mitendro mba hanavahana azy io amin'ilay izay mitohy e midika hoe "ka". È koa dia ampiasaina mba hanamarihana ny nanipika [ɛ] tamin'ny faran'ny teny iray ihany, toy ny ao amin'ny caffè.
È (è) dia ampiasaina ihany koa ny [ɤ] amin'ny lavo ny feo ao pinyin, ny teny Sinoa romanina-abidy hanoratana ny rafitra. Ny teny 鄂, ahitana afa-tsy izao teny, dia fanafohezana ny Hubei province 'ny Repoblika entim-bahoakan'i Shina.
È (è) dia ampiasaina koa amin'ny teny masedoniana toy ny mitovy ny taratasy ianareo amin'ny fasana (Ѐ, ѐ).
È (è) dia ampiasaina amin'ny Zavatra mba hanehoana ny taratasy "E" ny Dấu Huyền feo. Afaka ihany koa mitambatra amin'ny "Ê" endrika "Ế".
Windows ireo mpampiasa dia afaka mitendry è amin'ny alalan'ny fihazonana amin'ny "Alt" manan-danja teo ary keying 138.
Ianareo amin'ny fasana, ny teny sirilika taratasy mitovy izany glyph.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=È&oldid=795201"
Voaova farany tamin'ny 15 Janoary 2017 amin'ny 10:00 ity pejy ity.